Home / Fitaovana an-dakozia / Faucets lakozia ao an-dakozia / WOWOW Voninkazo nameno ny rindrina ao anaty nikela borosy
Noho ny famolavolana ergonomika azy, ny rindrina vita amin'ny vilany feno vilany dia mahazo aina ampiasaina.
Ny akora vy matevina avo lenta dia mahatonga azy maharitra.
Ity vokatra ity dia manome fanohanana azo antoka.
2311300 torolàlana fametrahana
Saribao feno vilany nopotsin-tsolika 2311300
Mitady endri-javatra manokana ao amin'ny famolavanao an-dakozia vaovao mba hahatonga ny lakozia ho miasa sy mahazo aina amin'ny fotoana mitovy? Avy eo dia ity vinaingin'ny mpanefy tanimanga ity dia mety ho zavatra ho anao. Sarotra aminao ve indraindray ny manondraka rano lehibe avy any amin'ny lakozian'ny lakozinao ka manjera? Io tsy fahatomombanana io dia an'ny taloha miaraka amin'ity vilany feno kitapo feno rano ao amin'ny WOWOW ity. Kitapo feno rano no mametraka ao ambadiky ny lakozia ao aminao, mba hananana rano eo akaikin'ny faritra fahandroana anao. Tena mahomby indrindra ity rehefa mila mameno vilany lehibe ianao mba handrahoana rano. Tsy mila mamindra vilany intsony ianao izay mety hampihenana onitra am-polony. Indrindra rehefa tsy te handratra ny sandrinao na ny tananao ianao dia mety ho vahaolana mahomby amin'ny fampiononana an-dakozia.
Ny fiantraikan'ny poti-pofona feno kapoaka amin'ny WOWOW dia ny fahatsapana fa afaka manadio ny fatana fandrehanao mora kokoa ianao, satria manana fifandraisana eo akaikinao ianao. Ny fanadiovana dia mora kokoa miaraka amin'ny gropy famoahana vilany. Ny sakamalaho feno kapoakan-tsolika feno kapoakan'ny WOWOW dia miaraka amin'ny valva seramika avo roa mba hiantoka ny traikefa tsy misy fatiantoka. Raha misokatra misokatra ny valopy iray dia tsy hiteraka fihoatra na inona na inona izany. Ilaina àry ny hanilika ireo valve roa mba hahazoana antoka fa mijanona amin'ny fotoana rehetra ny fatana an-dakozia. Aleo azo antoka kokoa noho ny miala tsiny!
Fangaro amam-boary natsipy maoderina
Ity fomba fanamboaran-tsolika feno kapila ity no manana fomba fijery maoderina. Tena manome tombony manokana sy manovaova ny lakozia ankoatry ny lanjan'ny sanda fampiasa azy io. Satria tsy fantatra ny mofomamy feno vilany, ny ankamaroan'ny olona dia manontany anao momba izany rehefa mahita ny lakoziazinao. Ny teboka faran'izay kely indrindra any an-dakozia dia ny sakamalaho. Midika izany fa ny mason'ny olona dia voasarika ho an'ny faucets an-dakozia rehefa mijery ny lakoziazinao izy ireo. Ity vela-pandresaka feno boribory ity dia mifanaraka tsara amin'ny haingo an-dakozia maoderina, ary mety hisarika ny saina manokana.
Ny poti-pofon-tsolika feno kapoakan'i WOWOW dia mety hoentina miaraka amin'ny faucet maoderina maoderina mba hamoronana firaisana mirindra ao amin'ny lakozia ao an-dakozia. Ny tsipika mitongilana mitambatra amin'ny endrika boribory dia endrika fampisehoana mahafinaritra. Ireo mpamorona ny WOWOW dia ekena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa manao ny famolavolana kanto tsy misy dikany izay afaka havoaka mora foana ao amin'ny magazine ambony indrindra momba ny famolavolana an-dakozia.
Atolony ny tavoahangy feno vilany natsofoka masaka
Ny fahavitan'ny vilany iray feno vilany no ahafahanao miakatra azy manoloana ny rindrina akaikin'ny fatanao. Afaka voatahiry mora manohitra ny rindrina izy io satria miaraka amin'ireo tadio roa tonta. Amin'izany fomba izany dia tsy manelingelina ny toerana fahandroana anao izy io satria manadio ny faritra fahandroana. Fa ianao dia hahatratra ny saika mahaliana efa ho 24 santimetatra mba hahafahana mameno vilany any anaty lavaka fatana. Azo faritana mora ilay potipotiky ny vilany feno raha mila azy ianao, ary averinao avy hatrany izany rehefa vita. Rehefa nametraka ity takelaka feno rano nopera voakarakara ity ianao dia hanenina fa tsy napetrakao ity fitaovana ity.
Mandeha tsara ny rano miaraka amin'ny mpamatsy Neoperl ABS avo lenta. Manome anao rano anti-splatter sy alàlan'ny rano malaky. Ny famenoana ny vilany ao anaty fatana fandrahoana anao dia ny herin-drano feno dia tsy hiteraka fahagagana. Ny rano mamontsina dia mety hiteraka toe-javatra mampidi-doza, indrindra rehefa mahandro ianao any an-davaky ny afo amin'ny fatana fandrehanao. Ny fatana fandrahoana anao dia mijanona amin'ny fotoana rehetra, ary azonao atao mihitsy aza ny mampiasa azy rehefa milahatra ny afo, tsy mampisy loza any an-dakozia.
Ny kalitao voapoaka nosy feno vilany
Ny roa valvesin'ity gropy famenon-dronono feno vy ity dia vita amin'ny fitaovana seramika, ary manome antoka ny fihodinana malefaka. Tsikaritrareo fa ny valva dia tsy miteraka fihemorana mihitsy ary tsy misy fifangaroana akory. Vokatr'izany dia azo antoka ianao amin'ny fandidiana tsara. Na dia manana tadivavarana marefo aza ianao, io vazy feno vilany io dia afaka miasa mora foana. Noho ny famolavolana ergonomika azy, ny rindrina napetaka stainless pot filler dia mahazo aina tsara ampiasaina. Ny sifotra fihodinana roa mihetsika ho an'ny 360 degre dia malama tsara.
Ny akanjony vy matevina avo lenta dia manamboatra ity tavoahangy feno vilany feno vy ity. Ny velaran-dranon-dranon-tanany voakapoka dia feno anti-scratch sy tsy misy hihoatra. Ny mpandray azy dia vita amin'ny varahina matevina, izay manome antoka tsara ny fikorianan'ny rano tsy misy sisa tavela ao. Ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny fahasalaman'ny tenanao sy ny fianakavianao. Noho ny kalitao dia matetika ampiasaina ao amin'ny toerana fivarotana toy ny trano fisakafoanana ihany koa io gripe feno bozaka nopera voasana io.
Warranty volavola feno voapoina feno siny
Ny poketra feno vilany natsosohana dia namboarina miaraka amin'ny kitapo fametrahana feno. Amin'ity kitapo fametrahana ity dia azonao atao ny mametraka mora fotsiny ny fametrahana ny vilany feno vilia natsipy voapetraka, tsy misy olana. Izy io dia hamonjy anao ny vidin'ny plumber lafo vidy. Ny kitapo fametrahana dia tonga amin'ny fitaovana rehetra mila ilainao mametaka ny faucet feno fikoronana misy rindrina. Ao anatin'izany ny kapila Allen, tehefo Teflon, ary ny fametahana sarin-tanana mba tsy hanimba ny tananao sy ny fitazomana azy ireo madio hatrany amin'ny dingana fametrahana. Noho izany dia manome toky izahay fa afaka mametraka ity vilany feno lozika feno rano ity ianao, ao anatin'ny antsasak'adiny. Mazava ho azy fa amin'ny toe-javatra misy anao ihany ny toerana misy rano eo amin'ny toerana mety.
Satria ny WOWOW dia resy lahatra amin'ny kalitaon'ny gropy feno vilany noporobohana, manome anao fotoam-pankasitrahana 5 taona. Satria ny WOWOW dia manolotra vidiny tsara indrindra ho an'ny vola hitanao, manome anao fiantohana vola 90 andro. Noho izany, tsy mitondra risika mihitsy ianao. Raha tsy resy lahatra amin'ity poti feno feno rano nikelikely ity ianao dia mahazo tambiny feno fotsiny. Ny WOWOW dia manondro ny vokatra azony ary azonao atao avy hatrany. Ny tombony azo amin'ny sakamalaho feno vilia natsofoka amin'ny fomba fohy:
• Mameno vilany famoronana maoderina
• Ny tonon-taolana sy valves kalitao
• Azo ampiasaina tsara
• Nihosinosina vita amin'ny nickel
• Mora ametrahana 30 minitra
SKU: 2311300 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Faucets lakozia ao an-dakozia Tags: Nickel nopotehina, Mpanefy vilany, Tima tokana
13.56 X 7.24 X 1.42 santimetatra
Fihodinana diplaoma 360, Firaisana roa, aforitra